लिलामीको सेयरमा लगानीकर्ता
पछिल्लो समयमा लिलामीको सेयरमा संस्थागत लगानीकर्ताका लागि मात्र हो भन्ने चर्चा चलिरहेका छन् । सर्वसाधारण लगानीकर्ताले लिलामीको सेयर पार्न कठिनजस्तै भइसकेको छ । सर्वसाधारणले लिलामीको सेयर हात पार्न बजारको मूल्यभन्दा बढी र बजारमूल्यको हाराहारीमा मात्र पाउन सकिने अवस्था छ । लिलामीमा रहेका अधिकांश सेयरहरू संस्थागत र म्युचिअल फन्डहरूले बजारमूल्यबराबर कोट गरी आफ्नो पोल्टामा पार्ने गरेका छन् । लिलामीको सेयर कम मूल्यमा पाउँछन् भनेर लिलामीको सेयरमा आवेदन दिने सर्वसाधारण लगानीकर्ता सबै जिल्ल पर्छन् । यसकारणले पछिल्लो समयमा लिलामीको सेयरमा संस्थागत लगानीकर्ताहरूले आईपीओमा जस्तै आवेदन दिन नपाउने वा निश्चित कित्तामा मात्र आवेदन दिन पाउन एउटामात्र आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ भन्ने लगानीकर्ताहरूको भनाइ छ ।
त्यसो त पछिल्लो समयमा लिलामीमा रहेको एभरेष्ट बैङ्कको सबै सेयरहरू बिकेन भने सनराइज बैङ्कको लिलामीमा रहेको सेयरमा अत्यधिक मात्रामा आवेदन परेको देखिन्छ । सनराइज बैङ्कको लिलामीको सेयरमा ११ हजार ३३१ आवेदन परेको बताइन्छ । त्यसो त सनराइज बैङ्कको लिलामीको अधिकांश सेयर पनि एउटा बीमा कम्पनीले बजार मूल्यबराबर कोट गरी आफ्नो पोल्टामा पारेको थियो । सर्वसाधारण लगानीकर्ता सबैले जिल खान प¥यो ।
हुनलाई त पछिल्लो समयमा लिलामीको सेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढिरहेको देखिन्छ । विभिन्न कम्पनीको हकप्रदमा नबिकेको सेयरहरू लिलामीमा बिक्री गरिने गरेका छन् । त्यस्ता लिलामीका सेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण रहेको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा विभिन्न बैङ्क तथा वित्त कम्पनीको सेयर लिलामीमा रहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्त कम्पनीहरूलाई कम समयमा चार गुणाले पँुजी वृद्वि गर्न निर्देशन दिएपछि कम्पनीहरूले धमाधम हकप्रद सेयरहरू जारी गरे थुप्रै बैङ्क तथा वित्त कम्पनीहरूले हकप्रद सेयर जारी गरेका कारणले कतिपय लगानीकर्ताहरूले हकप्रद सेयर नै खरिद गरेन । यसकारणले थुप्रै हकप्रदमा नबिकेका सेयरहरू कम्पनीहरूले लिलामीमा बिक्री गरिने गरिरहेका छन् । लिलामीका सेयरमा साना ठूला लगानीकर्ताहरूदेखि विभिन्न कम्पनीहरूको समेत आकर्षण रहेको देखिन्छ । कतिपय लगानीकर्ताहरूले लिलामीको सेयरहरू बजारमूल्यभन्दा बढी मूल्यमा खरिद गर्ने पनि गरिरहेका छन् । लिलामीका धेरैजसो सेयरहरू सङ्गठित संस्थाहरू कम्पनीहरूले बजारमूल्यको हाराहारीमा खरिद गर्ने गरिरहेका छन् । कृषि विकास बैङ्कको लिलामीको सेयरको चर्चा गर्दा पछिल्लो समयमा कृषि विकास बैङ्कको १९ लाखभन्दा बढीको लिलामीको सेयरमा ९ हजार २ सयभन्दा बढीको आवेदन परेको थियो । त्यसबेला कृषि विकास बैङ्कको लिलामीको सेयर आवेदन दिन लगभग आईपीओको जस्तै भएको थियो भने पछिल्लो समयमा सनराइज बैङ्कको लिलामीमा कृषि विकास बैङ्कको भन्दा बढी आवेदन परेको थियो भने सनराइज बैङ्कको आवेदन दिने सङ्कलन केद्रमा मेलाजस्तै लागेको थियो ।
एकातिर विभिन्न कम्पनीहरूको हकप्रद सेयरको बाढी नै आए भने अर्काेतर्फ थुप्रै सेयरहरू लिलामीमा रहेका कारणले सेयर बजारमा पनि यसले प्रभाव पारेको बताइन्छ ।
लिलामीको सेयरमा लगानीकर्ताहरूको आकर्षण रहे पनि कतिपय लगानीकर्ताहरूले लिलामीको सेयरमा बजारमूल्यभन्दा बढी तिरेर खरिद गर्ने गरिरहेका छन् । त्यसो त लगानीकर्ताहरूले जानेर वा नजानेर बजारमूल्यभन्दा बढी तिरेर लिलामीका सेयरहरू खरिद गर्ने गरेको पनि देखिन्छ । कृषि विकास बैङ्कको लिलामको सेयर खरिद गर्नका लागि न्यूनतम सयदेखि रु. ६०१ सम्म हालेको बताइन्छ । बजारमा चार सय ३० रुपियाँको हाराहारीमा पाउने सेयरको ६०१ रुपियाँसम्म तिरेको पाइयो भने नेपाल बैङ्कको लिलामीको सेयरमा पनि बजारमूल्यभन्दा बढी तिरेको पाइयो बजारमा ३३० मा पाइने नेपाल बैङ्कको सेयरको लिलामीमा ५५० सम्म तिरेको पाइयो त्यसैगरी सिद्वार्थ विकास बैङ्कको लिलामीको सेयरमा पनि बजारमूल्यभन्दा बढी तिरेको पाइयो । बजारमा जनता बैङ्कको सेयर २६५ मा पाइन्छ भने सिद्वार्थ बैङ्कको लिलामीको सेयरमा ४४० सम्ममा खरिद गरेको पाइयो । त्यसैगरी, सनराइज बैङ्कको लिलामीको सेयर पनि रु. चार सयभन्दा बढी तिरेको पाइयो भने रिलायन्स माइक्रो फाइनान्सको लिलामीको सेयरमा एक कित्तामा बजारमूल्यभन्दा दुई सयभन्दा बढी तिरेको पाइयो । लिलामीको सेयरमा बजारमूल्यभन्दा बढी तिर्ने थुप्रै लगानीकर्ताहरू छन् । चार सय ३० मा पाइने सेयर ६ सय एकसम्म तिर्ने गरेकामा कतै यस्तो लिलामीमा रहेको सेयरमा पनि चलखेल त हुने गरेको छैन भनेर पनि चर्चा नचलेको होइन । त्यसो त धेरैजसो कम्पनीहरूले बजारमूल्यको हाराहारीमा लिलामीको सेयरहरू सकार्न भएकाले सर्वसाधारण साना लगानीकर्ताहरूले लिलामीको सेयरहरू पार्न सकिरहेका छैनन् ।
लिलामीमा बिक्री गरिने सेयरहरू बजारको भन्दा बढी मूल्य तिरेर जानेर वा नजानेर लिने लगानीकर्ताहरू माइनसमा नजाला भन्ने छैन । लिलामीको सेयर बजारमूल्यभन्दा बढी तिर्ने थप्रै लगानीकर्ताहरू छन् । एकातिर सर्वसाधारणतर्फको लिलामीको सेयर बजारमूल्यभन्दा बढी तिर्ने लगानीकर्ताहरू पनि छन् भने अर्काेतर्फ संस्थापकतर्फको सेयरहरू लिलामीमा पनि बिक्री नभएको पनि देखियो । त्यसो त लिलामीको वस्तु सामान सेवा भनेको बजारमूल्यभन्दा सस्तोमा पाए किन्ने हो बजार मूल्यमा नै किन्न परे किन लिलामीमा गएर दुःख पाउने र समय खेर फाल्ने । बजारमा किनेको सेयर चार दिनपछि बिक्री गर्न सकिन्छ भने लिलामीको सेयर पनि बिक्री गर्नका लागि महिनाँै कुर्नुपर्ने हुन्छ खोई त लगानीकर्तामा चेतना ? अझ मर्जर र एक्विजिसनमा प्रक्रियामा रहेको कम्पनीको लिलामीमा किनेको सेयर त कहिले बिक्री गर्न पाउने हो थाहा हुँदैन ।
सामान्य तया लिलामीमा रहेको सामान वस्तु सेवा वा सेयर नै किन नहोस् बजार मूल्यभन्दा कममा पाए लिने भनेर भनिन्छ । तर, पछिल्लो समयमा लिलामीमा रहेको सेयरहरू पनि बजारमूल्यमै तिरेर लिने गरेको पाइन्छ । विभिन्न कम्पनीले आफ्नो पुँजी बढाउनका लागि हकप्रद सेयरहरू जारी गर्ने गर्छन् । कम्पनीले आफ्ना साबिकका सेयरधनीहरूलाई मात्र जारी गरिने सेयरलाई सामान्य तथा हकप्रद सेयर भनेर भन्ने गरिन्छ । आफ्ना साबिकका सेयरधनीहरूका लागि जारी गरिने हकप्रद सेयरहरू बिक्री नभएका सेयरहरू पछिल्लो समयमा लिलामबाट बिक्री गरिने गरिरहेका छन् । यस्ता लिलामीका सेयरप्रति सर्वसाधारणदेखि संस्थागत लगानीकर्ताको आकर्षण रहेको पाइन्छ । कतिपय लगानीकर्ता लिलामीका सेयरहरू सस्तोमा पाइन्छ भनेर लिलामीमा सहभागी हुन्छन् तर यस्ता लगानीकर्ता जिल्ल पर्छन् ।
पूर्व गृहमन्त्री घिमिरे चडेको गाडी दुर्घटना तीनको मृत्यु तीन वेप�